Kindle Paperwhite နှင့် Kindle Kids အသစ်၊ Amazon ၏ကစားနည်းသည်ဤဆောင်း ဦး ရာသီ | eReaders အားလုံး
Amazon သည်၎င်း၏စာဖတ်ပရိသတ်များကိုယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ယနေ့ ပို၍ တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားချက်များနှင့်ဖိုင်လ်ဖိုင်လ်ကိုမြင်နိုင်သည် Kindle Paperwhite နှင့် Kindle Paperwhite Signature Edition အသစ်.
ဒါပေမယ့်လည်း Amazon ကငါတို့မှာတရားဝင်ကောလဟာလတွေမပါတဲ့အံ့သြစရာအသစ်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီထဲကတစ်ခုကတော့ Kindle ကလေးများအပိုင်း မွေးကင်းစကလေးဖတ်ခြင်းကဏ္ at ကို ဦး တည်သော Amazon ကိရိယာများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအခြေခံ Kindle ငါတို့မှာလည်း Kindle Kids လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေရတယ် Kindle Paperwhite ကလေးများ Kindle Paperwhite ကိရိယာအသစ်နှင့်တူသော်လည်း၎င်းသည်ငါတို့၌လည်းစာရင်းပေး ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည် Kindle Unlimited ၎င်းသည်အိမ်၏အသေးဆုံးကိုစာအုပ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ဖတ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Amazon သည်၎င်း၏ Kindle Paperwhite မော်ဒယ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သည်၊ သို့သော်အခြား Kindle များနှင့် Kindle Oasis ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်က Amazon Canada website တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောယိုစိမ့်မှုသည်ပြည့်စုံသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးကြေငြာနိုင်သည်ကိုငါတို့မသိနိုင်သောအချက်များရှိသည်။ ဘက်ထရီနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အားသွင်းတဲ့ပြဿနာတွေမရှိအောင်လည်း Amazon သည် usb-c port တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်ရိုးရာကုန်တင်ဆိပ်ကမ်းကိုဖယ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါကလက်တွေ့ကတည်းကအဆင်မပြေနိုင်ဘူး ereader charger အဟောင်းကိုငါတို့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့်ငါတို့ကတခြားတစ်ခုကို ၀ ယ်ရမယ်။ သို့သော်အဖုံးပါ ereader အထုပ်တွင်အားသွင်းစက်ပါ ၀ င်သည်။
El Kindle Paperwhite Signature Edition အကောင့် သူတို့ကငါတို့ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြားတာလဲ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်နှင့် usb-c port တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အဖုံးတစ်ခု၊ ereader နှင့် wireless charger တို့ပါ ၀ င်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤထုတ်ဝေမှုတွင် Amazon သည်၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်၎င်းကိရိယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုသောဒြပ်စင်များနှင့်ပြုလုပ်သည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောထုပ်ပိုးမှု Kindle Paperwhite အသစ်နှင့်လဲလိုလျှင် ereader ဟောင်းအားဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အသက်ပေးရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကလေးများစာဖတ်ဝါသနာပါစေရန် Kindle Kids သည်အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည်
ဒါပေမယ့်ငါ့အာရုံကိုဖမ်းစားဆုံးအရာက Kindle ဂေဟစနစ်အတွက်ကြီးကြီးမားမားအထောက်အပ့ပေးမယ့်အချက်ကသေးသေးလေးတွေကိုအာရုံစိုက်တာသေချာတယ်။
Amazon သည် Kindle Unlimited ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သော Kindle Kids ကလေးများအတွက်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြေငြာပြီးတိုးတက်စေခဲ့သည် ကလေးအကြိုက်စာအုပ်များမရ။ ထို့အပြင်ကိရိယာများတွင်အဖေ (သို့) အမေသည်ကိရိယာအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ရန်ခွင့်ပြုသောအထူးဆော့ဝဲဗားရှင်းတစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကလေးအချိန်ဇယားများသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်စက်အလုပ်မလုပ်တော့သည့်အချိန်ကိုညွှန်ပြသည်။ အချို့ဖတ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ပါသို့မဟုတ်အလင်းအာရုံခံကိရိယာကိုပြုပြင်ပါ.
ဤဗားရှင်းများနှင့်ပုံစံအသစ်များသည်စာဖတ်သူများကိုအားဖြည့်ပေးသောကလေးများနှင့်လူငယ်တို့၏ motifs များပါ ၀ င်သောအဖုံးများအစီအရီပေါ်လာသည်နှင့်၎င်းကို usb-c charger အပါအ ၀ င်သီးခြားစီ ၀ ယ်နိုင်သည်။
လောလောဆယ်မှာသူတို့ကနိုင်ငံအားလုံးအတွက်မရသေးတာကြောင့်ရောင်းဖို့မရနိုင်သေးဘူး။ ၏စျေးနှုန်း ပုံမှန်မော်ဒယ် $ 139, မော်ဒယ် Kindle Paperwhite Signature သည် ၁၅၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည် Paperwhite နှင့် Kindle Basic မော်ဒယ်များအတွက် $ 159 နှင့် Kindle Kids မော်ဒယ်များသည် $ 109 နှင့် $ XNUMX အသီးသီးဖြစ်သည်။
Amazon သည် 4G ဆက်သွယ်မှုနှင့်ကြော်ငြာများကိုစွန့်ခွာနေသလား။
Kindle Kids သည်အလွန်ဆန်းသစ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်သည် Amazon ကိုပထမဆုံး Kindle မှစ၍ web သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူဖြစ်လျှင်သင်စိတ်ထိခိုက်လိမ့်မည်။ Amazon သည်ကြော်ငြာမပါဘဲ Kindle Paperwhite ဗားရှင်းတွင် ၀ ယ်ယူမှုကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်ယခုအချိန်ထိထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးမရှိတာအမှန်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကြော်ငြာကကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကအာရုံကိုမဆွဲဆောင်တော့ဘူး။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Kindle Paperwhite ၏ဤဗားရှင်းသည် 4G ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ, IE, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအမြဲလိုအပ်လိမ့်မယ် ebooks များ၊ သတင်းများကို download လုပ်၍ ၀ ယ်ယူနိုင်စေရန်။ ၎င်းသည် Amazon ကိုအကျိုးပြုသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်လည်းမှန်သည် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့လာပါတယ် ဖောက်သည်တွေကအများကြီးအသုံးမ ၀ င်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကုမ္ပဏီကိုဆွဲငင်လာမယ်။ ဤအရာသည်မကြာသေးမီလများအတွင်း Amazon သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်နှင့်ကိရိယာအသစ်များတွင်အသုံးမ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဈေးကွက်၌သော်လည်းကောင်းစပိန်၌ဖြစ်နိုင်သော ၀ ယ်ယူမည့်နေ့ရက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်သေးပါ အောက်တိုဘာလ 28 ရက်ကနေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ဒါပေမယ့်စစ်ထုတ်ပြီးနောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့မှာဒီတက်ဘလက်တွေရှိနေပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ဖတ်စာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနာရီတွေအတွက်အသုံး ၀ င်တဲ့ကိရိယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » Kindle Paperwhite နှင့် Kindle Kids အသစ်များ၊ ဤဆောင်း ဦး ရာသီအတွက် Amazon ၏ကစားနည်း